Ixesha lokuLungiselela uNyaka oMtsha waseTshayina ngo-2021
Iholide yoNyaka oMtsha waseTshayina ka-2021 ngoFebruwari 12 ukuya kuthi ga kuFebruwari 26. Njengoko le yiholide yesizwe ichaphazela yonke imveliso e-China. Ngapha koko, njengoko kusekho ukungaqiniseki okuninzi ngesifo se-coronavirus, kunye namava ethu onyaka omtsha wonyaka ...
Umboniso we-Electronica South China e-Shenzhen
I-Electronica, yenye yemiboniso ekhokelayo kushishino lwe-elektroniki, ivule umcimbi wayo wokuqala eMzantsi China. Umboniso weentsuku ezi-3 uqala nge-3 kaNovemba ngo-2020 kwiziko elitsha elitsha laseShenzhen. I-exhibitio ...
Umnyhadala waseTshayina ophakathi kweAkwindla kunye nosuku lweLizwe
Kulo nyaka umnyhadala wase China wase Mid-Autumn kunye nosuku lukaZwelonke lwenzeka kwakule veki inye; I-1 ukuya kwe-7 kweyeDwarha. Kuba ezi holide zinokuchaphazela imveliso e-China ngeedigri ezahlukeneyo, sihlala silungiselela isenzo-izicwangciso kunye nawe ukufumana iindlela ezahlukeneyo zokuphepha ...
Imijikelezo yePandawill kwiExppoElectronica
Imijikelezo yePandawill, umthengisi wePCB kunye nePCBA oqeqeshiweyo ovela eShenzhen China uzakuveza ubuchwepheshe bayo bePCB kunye neenkonzo zebandla lePCB kweyona mboniso inkulu ye-elektroniki iEexpoelectronica eRashiya. Yiza udibane noStephen ovela kwiPandawill Circuits e-A284 ukuze sixoxe ngayo yonke i-PCB Manufacturing and Ass ...
Inkonzo PCB Ubeko Iyafumaneka
Kubathengi bethu bexabiso, ubeko lwePCB kunye neenkonzo zoyilo yenye yeendlela esinceda ngazo abathengi bethu ukuba bathengise ngokukhawuleza njengoko iqela lethu lobunjineli linamava abalulekileyo ehlabathi ekuyileni ii-PCB zokusebenza kunye nokwenza izinto. Iqela lethu iinjineli kunye nabaqhubi CAD / CAM ziyafumaneka t ...
Unyaka Omtsha waseTshayina 2019, unyaka wehagu
Iholide yoNyaka oMtsha waseTshayina Iiholide zikaNyaka oMtsha zaseTshayina zika-Februwari 4 ukuya ku-10 kaFebruwari. UNyaka oMtsha waseTshayina yeyonaholide ibaluleke kakhulu eTshayina. Ikwaziwa ngokuba nguMnyhadala weNtlakohlaza. Imibhiyozo yoNyaka oMtsha waseTshayina ngokwesiko yayibaleka kunyaka omtsha waseTshayina ...